Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo shamwari yechirume . . . | Kwayedza
Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo shamwari yechirume . . .
29 May, 2015 - 00:05	 2015-06-05T15:09:07+00:00 2015-05-29T00:00:07+00:00 0 Views
NDAPOTA hangu vachiri kufona panhamba idzi 0774 142 363 chiregerai henyu nekuti ndakawana wandaida. Musafone veduwe-e nekuti imba yangu ingaputsika.
Ndiri murume ane makore 36 ndinotsvagawo musikana ane makore 26 zvichidzika. Sms pa0777 180 896.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nemwana mumwe, HIV positive uye ndinodawo murume ane makore 34 – 39 ari positive seni. Ngaave ari kuda zvemba, anoshandawo ane vana vaviri kana vatatu. Ndibateiwo pa0776 417357.
Ndiri murume ane makore 39 ndodawo mukadzi ane makore 30 zvichidzika, asati aroorwa asina mwana. Ndibatei pa0739 824 548.
Makadii mose? Ndiri mukomana ane makore 30 okuzvarwa uye ndinotsvakawo musikana anotya Mwari, ane mwoyo wetsitsi, munhu anofara nekusununguka. Ari pachokwadi ngaandibate pa0715 230 023.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 25 kusvika 19 asina chirwere nokuti ini handinawo. Andifarira anondibata pa0776 221 842 nepaWhatsApp, kunyanya vanobva kwaMutare.
Ndiri mudzimai ane makore 28 nemwana 1 ndiri HIV+. Ndinotsvakawo murume ari pachokwadi ane mwana 1 ane makore 30 kusvika 40 anoda zvekuroora anoshanda ari HIV+ sezvandiri. Andifarira ngaandibate pa0716 767 004.
Ndotsvagawo mudzimai ane makore 20 – 23, ane mwana mumwe uye ari HIV positive. Ndiri murume ane makore 34, ndinoshanda muHarare. Ari pachokwadi ndibate pa0773 686 758.
ndiri murume ane makore 36. ndinotsvagawo musikana ane makore 26 zvichidzika. sms pa0777180896
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana wekudanana naye ane makore 18-23. Nhare yangu 0774 286 163.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana mumwe chete uye ndiri HIV positive asi ndakasimba. Ndiri kutsvagawo murume anooda kuroora, ari pachokwadi, anonamata. Ngaave ane vana vakewo, vakasununguka ngavandibate pa0773 164 086.
Makadii vekwayedza? Zvangu hazvisati zvaita ndakatsotsiwa, ndiri mukomana ane makore 24 ndotsvakawo musikana wekuroora ane makore anotanga 18 kusvika 23. Nhamba yangu 0713 952 458, ndiri paWhatsApp.
Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo shamwari yechirume yokuwirirana nayo. Ndiri HIV negative, nhare yangu 0713 053 036.
Ndinodawo murume anoda zveimba ane makore 42-50. Ndine makore 42, nhamba yangu 0716 137 003.
Ndiri murume ane makore 32 ndiri kutsvagawo mukadzi ane zvinhu zvake ane makore 25 kusvika 32. Ngaange asina chirwere, vanoda ndibatei pa0716 493 239.
Makadini veKwayedza? Muri kugona basa, ini ndiri musikana ane makore 19 ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi. Handidi zvekutamba ndinoda ane makore 20-26 asi varume vevanhu ndapota musafona. Nhamba dzangu 0771 009 789.
Makadii henyu? Ndinotsvaka musikana ane makore 18 kusvika 20. Ini ndine makore 25 uye ndinoda anobva Hurungwe. Nhare yangu 0778 552 388.
Ndinonzi Prince, ndine makore 25 ndinoshanda uye handina mwana. Ndiri kutsvaga musikana wokuwana ane makore 20 zvichidzika. Anobvuma kunotorwa ropa ngaandibate pa0782 830 753.
Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvaga mudzimai akarongeka, akasimba ane makore ari pasi peangu. Anoda nhare yangu 0777 698 686.
Ndiri murume ane makore 35, handinai chirwere uye ndotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye. Akazvipira ngaandibate pa0771 868 856.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 23 zvichidzika. Akavimbika ngaandibate panhamba dzangu idzi 0777 717 214.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvaga musikana, anondibata pa0782 193 645.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 nevana 2 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 30 zvichikwira. Nhamba dzangu 0773 311 651.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvaga musikana wekushamwaridzana naye. Anenge andifarira anondibata pa0771 138 080.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 40, HIV positive uye ndotsvagawo murume ane makore 40 – 50 ari positive. Ndobatika pa0714 861 995.
Ndiri murume ane makore 32 nemwana 1 ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore ari pasi pe32 anoda zvemba, ngaave ane mwana 1. Ndinoda anoshanda chero asingashande, ini ndinoshanda andifarira anondibata pa0771 325 598 asi matsotsi kwete.
Makadii zvenyu veKwayedza? Basa munogona chose asi ini handina wekupawo rudo, ndinotsvaga musikana ane makore ari pasi pe20 akavimbika anonamata zvisinei kuti anonamata chechi ipi. Ndinoda akazvipira kuongororwa ropa, andifarira nhare yangu 0716 531 140 kana kundibata paWhatsApp.
Ndiri mudzimai ane makore 31, ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 40 zvichienda mberi. Anoshanda kwete rovha ngaandibate pa0782 365 509.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvaga musikana wekudanana naye. Anondida anondibata pa0782 193 645.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 36 ndinotsvagawo murume anoratidzikawo uye anonamata asiri wekuMasowe. Ndinoda ane makore 39 kusvika 45, asina chirwere. Ngaave anoshanda nekuti ini ndinoshandawo, ndibatei pa0716 197 754.
Handisati ndamuwana wekufambidzana naye, ndiri kutsvaga musikana ari pachokwadi anoda kuroorwa ane makore 19-21. Anoda ngaandibate pa0775 695 983, ini ndine makore 22.
Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20-23 ane mwana mumwe chete anodawo mwana wangu. Ndibatei pa0773 030 639.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 40 ndinotsvagavo murume ari pachokwadi asinganwi doro anoda zvekuroora. Ngaave asingadi zvemafaro enyika kana paine anoda anondibata pa0774 074 399 asi vane vakadzi vavo siyanai neni ndapota hangu.
Ndiri murume ane makore 35 ndoda mukadzi ane makore 20 – 27 ane mwana 1 anoda zvemusha kwete zvemapoto. Ndine mwana 1, nhare yangu 0779 181 969.
Ndiri mukadzi ane makore 45 nevana 2 vakapedza chikoro. Ndiri muHarare, ndakafirwa nemurume uye ndinotsvagawo murume akafirwa seni anoda kuroora. Anotya Mwari, asingapute fodya kana kunwa doro ane makore 50 – 65. Anondifarira ngaandibate pa0772 498 168.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndiri kutsvaga musikana ane makore 22 kusvika 26, akanaka akarongeka. Ndiri mutyairi wegonyeti, vanondida ndibatei pa0779 576 704.
Ndiri murume ane makore 40 ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 22 kusvika 38 anogara Gweru, Harare kana Mutare. Ngaavewo ane chimiro chakanakawo, andifarira ngandibate pa0782 809 843. Ndinoshanda.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusivika 30 ane mwana kana asina. Nhare yangu 0715 156 128.
Ndiri musikana ane makore 21, ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi anoda zvekuroora ane makore 23-26. Anoda ngaandibate pa0733 040 123.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvaga shamwarikadzi ine makore 25 zvichidzika. Anoda ngaafone kana sms pa0733 764 606 asi ngaave ari muHarare.
Ndiri murume ane makore 61 ndinoda mudzimai ane makore 50 – 55. Ndine munda nezvipfuwo uye mhuri yangu yose yave nedzimba. Ndinobatika pa0775 401 173.